ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လများ၏ content အရေးအသားပြင်ပေးဖို့ကိုလမ်းညွှန်
ပင်မစာမျက်နှာ » ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လများ၏ content အရေးအသားပြင်ပေးဖို့ကိုလမ်းညွှန်
1 ပစ္စည်းများကိုလမ်းပြကြေညာချက်များ, သတင်း, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
1.2 အကြောင်းအရာအရေးအသားများအတွက် keyword ကို
1.2.1 တစ်ဦး keyword ကိုများသောအားဖြင့်ကိုရှာဖွေလျှင်သင်မည်သို့သိနိုင်မည်လဲ?
1.4 အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ links
1.6 Youtube ကိုဗီဒီယိုများ
ပစ္စည်းများကိုလမ်းပြကြေညာချက်များ, သတင်း, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
စာသားသည်ကအရိုးရှင်းဆုံးအဆင့်ကိုဒီဇိုင်းဒြပ်စင်ဖြစ်ရပါမည်, အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှ format ကိုယူသင့်ပါတယ်။ သည်ကွဲပြားခြားနားသောစာသားအရွယ်အစားကိုမသုံးကြဘူး။ သာက default စာသားအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုပါ။
စာရင်း: သူတို့ကရေတွက်သို့မဟုတ်မေတှကျနိုငျနေကြသည်။ ရမှတ်သို့မဟုတ်နံပါတ်များကို 1 လျှော့အတူရိုးရှင်းသောစာရင်း။
ရှောင်ကြဉ်ရန်: မျဉ်းသား၊ စာသားအရောင်များစသဖြင့် ...
စာသားသမ်မာကမျြးသို့မဟုတ် Google Docs ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ အကယ်. သင်က web မှ upload မပြုလုပ်မီက HTML format ကိုကပြောင်းဖို့လိုသည်။ ဤသည်ဤကဲ့သို့သော tool ကိုသုံးပြီးလိုအပ်ပါတယ်: https://word2cleanhtml.com။ စာသားအားလုံးကိုသမ်မာကမျြးသို့မဟုတ် Google Docs သို့ရရှိသွားတဲ့, သင် HTML မှာစာသား back ။ ထိုအခါက HTML ထဲမှာစာသား WordPress ကိုအယ်ဒီတာ tab ကို HTML ကိုစ paste လုပ်ထားတဲ့သည်:
အကြောင်းအရာအရေးအသားများအတွက် keyword ကို
ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည်အများဆုံးရှုပ်ထွေးလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည် အကြောင်းအရာအရေးအသားဒါကြောင့်ငါတတ်နိုင်သမျှအခြေခံအကျဆုံးအရာတစ်ခုခုကိုအဆိုပြုသွားမယ်။ သော့ချက်စာလုံးသည်စကားလုံး ၂ လုံးမှ ၅ ခုကြားရှိအစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ထူးခြားပြီးဆောင်းပါးတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုသည်။ ဥပမာ - အကယ်လို့ဆောင်းပါးက“ အကြောင်း” ကိုပြောရင်Corunna လူ့ကွင်းဆက်"ထိုအခါ5စကားလုံးများကို၏ဤ set ကိုကောင်းစွာ keyword ကိုပုဒ်မများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နိုင်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤဥပမာတွင် "လူသားကွင်းဆက်" သည်ရနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ စံပြစကားလုံးသည်လူအများ Google ကိုမကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး keyword ကိုများသောအားဖြင့်ကိုရှာဖွေလျှင်သင်မည်သို့သိနိုင်မည်လဲ?
ဒီ tool သုံးစွဲဖို့သမ်မာကမျြး Tracker: https://www.wordtracker.com/search (စပိန်, နယ်မြေတွေကိုအတွက်ခံရမည်ရလဒ်များရှိခြင်းဖြင့်ရှာဖွေမှု ၁၀ ​​ခုသည်လုံလောက်သည်။ အသေးအဖွဲဖြစ်သောစကားလုံးကိုမသုံးပါနှင့်။ ဥပမာ -“ ငြိမ်းချမ်းရေး” ။ အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေမှုကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောကြောင့် Wordtracker ကိုအသုံးမပြုနိုင်တော့လျှင်လည်းသင်ကြိုးစားနိုင်သည် Übersuggest.
အကောင်းဆုံးကတော့၎င်းတွင်ရလဒ်များရှိသင့်သော်လည်း ၁၀ နှင့် ၅၀၀ အကြားဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များရှိသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - "ကမ္ဘာ့ချီတက်ပွဲ" သည်လုံလောက်သည်။ အလွန်ကောင်းသည်၊ ၁၀ လုံးသာရှိသော်လည်းလုံလောက်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ“ ငြိမ်းချမ်းရေး”၊ “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ကောင်းစွာ 500 အထက်:
အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကဒီသော့ချက်စာလုံးသွင်းထားရန်ဖြစ်ပါသည် စာသားထဲမှာအနည်းဆုံး2ကြိမ် ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆှေးနှေးကွမညျသောအခြားအချက်များမရှိဘဲ။ ဒီသော့ချက်စာလုံးများ၏အထပ်ထပ်တစ်ခုမှာ, သငျသညျရဲရင့်ဖြစ်ရပါမည်.
(ညာအပေါ်က box ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာ) ကိုအဓိကခေါင်းစဉ် 50 နှင့် 75 ဇာတ်ကောင်များအကြားဖြစ်ရပါမည်။ ထိုသို့ keyword ကိုပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်သတိပြု, keyword ကိုရွေးချယ်ဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးင်
ဒါဟာစာသား, အတော်ကြာကိုင်ဆောင်သူယူအနည်းဆုံးကိုင်ဆောင်သူ2အဆင့် (နှုတ်ကပတ်တော်၌ခေါင်းစဉ် 2) ထိုမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, 1 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကိုင်ဆောင်သူ23 အဆင့်နှင့်လည်းအဆင့်ကိုယူပါ။
လည်း ဒါဟာအကြံပြုသည် "ဒီမှာဒီမှာစာတန်းထိုးထည့်ပါ" ဟုပြောသည့်အဓိကခေါင်းစဉ်အောက်ရှိခေါင်းစဉ်ခွဲကိုထည့်ပါ။
အဆိုပါစာတန်းထိုး၏အရွယ်အစားသူတို့ Meta ဖော်ပြချက်သုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, 121 နှင့် 156 ဇာတ်ကောင်များအကြားရှိထွက်ရှိသော, ကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ လည်း ဒါဟာအစ keyword ကိုပါဝင်သည်သင့်တယ်.
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ - ပိုင်ရှင်3(H3) တွင်အထက်တွင် H2 ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးထိုအဆင့်ကိုအမြဲတမ်းပေးရန်အနည်းဆုံးကိုင်ဆောင်သူ H1 ရှိရမည်။ H2> H2> H3
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: H4 ကအမြဲတမ်း H3 ကိုရှေ့ပြေးထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်မှားသည်။
H3 - H2: မှားသွားလိမ့်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ H3 ကို H2 တစ်ခုကအမြဲတမ်းအရင်တင်ထားရမယ်
H3 - H3 - H3: အနည်းဆုံး H2 တစ်ခုရှိရန်လိုသည်
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3 ။ အဆင့်ဆင့်အမိန့်ကိုလေးစားသောကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့က keyword ကိုဖြစ်သင့်တယ်, 1 အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်အတွက် (ကခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်23 ရှိမရှိအရေးမဟုတ်) ။
စာသားမ မှလွဲ. အပြင်ထွက်လင့်များသုံးစွဲဖို့မကြိုးစား2အများဆုံးသာ 1 ပိုကောင်းပေမယ့်။
ကဂုဏ်သတင်းတွေအများကြီးနဲ့စာမျက်နှာပြင်ပ link ကိုမဟုတ်လျှင် ** , ဝီကီပီးဒီးယားအမျိုးအစားတစ်ခုအစွမ်းထက်သတင်းစာ သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုအဖြစ် link ကိုထား NOFOLLOW ရွေးချယ်မှုများအတွက်:
ဒါဟာ web ပေါ်မှာအခြားအချက်မှတစ်ချိန်ချိန်သောဆောင်းပါးလင့်ခ်ကအရေးကြီးတယ်။ သင်အမြဲတမ်းအိမ်ပြန်စာမျက်နှာသို့လင့်ထားသည်နှုနျးနိုငျတဲ့မစဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်။
ဥပမာ -“ နောက်ဆုံးမှာ ကမ္ဘာ့ဖလားချီတက်ပွဲငါတို့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်”
ပြည်တွင်းရေး link ကိုမှာ nofollow ကိုမထားပါဘူး။
** သငျသညျဂုဏ်သတင်းတွေအများကြီးရှိသည်သို့မဟုတ်မပါလျှင်သင်သိမထားဘူးဆိုရင်, သို့ရောက် https://www.alexa.com/siteinfo ဒိုမိန်း၏ URL ကိုဥပမာ "today.es" တွင်ထည့်ပါ။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် 100.000 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်သည် nofollow ထားရန်ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်လျှင် အထက်, သငျသညျထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ပါဘူး.
ပုံတစ်ပုံကို upload မပြုလုပ်မီရုံစိတ်ထဲတွင်ဤအချက်များစောင့်ရှောက်:
ပုံ၏အမည်သည်“ ñ” (ñအတွက် n ပြောင်းခြင်း) မပါ၊ အသံထွက်မပါဘဲ၊ ရိုးရှင်းသင့်သည်။ နေရာများရှိပါကတုံးတိုများဖြင့်ပြောင်းပါ။
သငျသညျပုံထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ, သင်ခေါင်းစဉ်, အခြားစာသားနဲ့ဖျေါပွခကျြထဲမှာဖြည့်ရန်ရှိသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သုံးကဏ္ဍများအတွက်တူညီထားနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမ image ကိုကျယ်ပြန့် 1000 px ထိကျော်လွန်သင့်ပါတယ်။
လည်း သင်တစ်ဦး featured ရုပ်ပုံထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်စာသားထဲမှာပုံရိပ်တစ်ခုထားရှိလျှင်, ထူးချွန်ကဲ့သို့တူညီသော image ကိုမသုံးကြဘူး။ ဒါဟာစာသားထဲမှာမရှိထူးချွန်ပုံရိပ်ရှိပါတယ်မျှပုံရိပ်ကြောင်းပိုကောင်းပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှာတော့အခြားစာသားနဲ့ဖော်ပြချက်ပုံရိပ်ကို Featured, keyword ကိုထားရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
image ကိုများအတွက်စံပြအရွယ်အစားထူးချွန်ဖြစ်ပါသည် X ကို 960 540 သို့မဟုတ် 16 တစ်ခုအချိုး:9။ ပုံရဲ့ width ကို 600px နှင့် 1200px အကြားကျယ်ပြန့်ဖြစ်ရပါမည်။
[Su_youtube_advanced url = "https://www.youtube.com/watch?v=MDvXQJgODmA" modestbranding = "ဟုတ်ကဲ့" https = "ဟုတ်ကဲ့"]
ရိုးရှင်းစွာအသင့်လျော်များအတွက် URL ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့။
ဤတွင်ကျွန်မပြင်ဆင်ကြပြီ တစ်ဦးဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ PDF ကိုစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း မည်သည့်မှတ်မိဖို့အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်အတူ။